Samachar Batika || News from Nepal » र’क्सी सेवन गरेर यौ’नसम्व’न्ध राख्नुहुन्छ ? होसियार ! हुनसक्छ यस्ता ७ असरहरु,
मानिसमा गाँस, बास, कपाससँगै यौ’न पनि अपरिहार्य छ । मानिसमात्रै होइन हर प्राणीमा यौ’न आवश्यक छ । माद’क पदार्थ से’वन गर्ने मानिसहरुको यौ’न जीवनबारे विभिन्न टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ । तर, र’क्सी र यौ’नबारे समाजमा खुलेर बहस हुन भने सकेको छैन । पुरुषहरूमा र’क्सीले इरेक्शन प्राप्त गर्न र यसलाई कायम राख्न क’ठिनाइ हुने गर्दछ भने महिलामा यो’नीरस पर्याप्त मात्रामा नआउँदा पी’डा अनुभव
सामान्यरुपमा आपस कुराकानी र आक्कलझुक्कल ब’हस हुने गरेको छ । यसबारे खुलेर तथा खुला रुपमा ब’हस नहुँदा मानिसको शारीरिक तथा मा’नसिक स्वास्थ्य सुधारमा टेवा पुग्न सकेको छैन । माद’क प’दार्थ से’वनले कालान्तरमा महिला र पुरुष दुवैको यौ’न जीवनमा न’कारात्मक असर पुर्याउने गर्दछ।
क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक र म’दिरा विशेषज्ञ डा.अबीगेल सैन भन्छन्, ‘र’क्सीले पुरुष र महिला दुबैको यौ’न संवे’दनशीलतालाई कम गर्दछ’। पुरुषहरूमा र’क्सीले इरेक्शन प्राप्त गर्न र यसलाई कायम राख्न क’ठिनाइ हुने गर्दछ भने महिलामा यो’नीरस पर्याप्त मात्रामा नआउँदा पी’डा अनुभव गर्दछन् । साथै स’म्भोग गर्न क’ठिनाई हुने र स’म्भोगको उच्चतम आ’नन्द प्राप्त गर्न सक्दैनन्।
जानिराखौं र’क्सीले महिला र पुरुषको यौ’न जीवनमा पार्ने अ’सर
पुरुषमा देखिने अ’सर
१. पुरुषमा र’क्सीले थुप्रै समस्याहरु नि’म्त्याउने गर्दछ। जसमध्ये एक हो, यौ’न कार्यका लागि लि’ङ्ग तयारी नहुनु । साथै इरेक्शनसँग सम्बन्धित समस्या, र’क्सीमा पाइने तत्वले पुरुषको लि’ङ्गमा र’क्त संचारलाई धेरै कम गर्दछ। साथै एन्जियोटेन्सिन नामक हर्मो’नलाई बढाउने गर्दछ, जसले इरेक्टाइल डिसफङ्शन पनि निम्त्याउन सक्छ।
२. अत्या’धिक र’क्सी से’वनले पुरुषको स्खल’नमा ढिलाइ हुने समस्या निम्तिन सक्छ। र’क्सीको कारणले यौ’नको उच्चत्तम आनन्द प्राप्त गर्न निकै समय लाग्न सक्छ, कहिले काहीँ ३० मिनेटभन्दा ज्यादा समय लाग्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा, लामो समयसम्म उत्ते’जना कायम गर्न गा’ह्रो हुन्छ।
३. अध्ययनकाअनुसार उचित मात्रामा र’क्सी पिउँदा यौ’न चाहना बढ्न सक्छ, तर चेतना गुमाउने गरि र’क्सीको सेवनले महिला तथा पुरुषमा यौ’न सम्ब’न्धले निकै गम्भी’ररुप लिन सक्छ । जसको प्रत्यक्ष अ’सर दैनिक जीवनमा पर्ने गर्दछ। यसको असरले पुरुष र महिलाबीच सम्ब’न्धवि’च्छेदको अवस्था पनि सिर्जना हुने गर्दछ।
४. अ’त्याधिक र’क्सीले से’वनले मानिसको चेतनालाई ठूलो अ’सर पु¥याउँछ । यसले सही सोच्न र बुझ्ने क्षमतालाई अ’सर गर्छ, जसले गर्दा धेरै पुरुषहरु अनै’तिक सम्बन्ध राख्ने जो’खिम बढ्ने गर्दछ। र’क्सीको सेवनले पुरुष प’रस्त्रीसँग यौ’न स’म्बन्धसम्म राख्ने ख’तरा बढ्ने गर्छ जसका कारण यौ’नरोगको संक्र’मणमा पर्ने जो’खिममा पर्दछन्।
१. महिलालाई पनि र’क्सीको प्रभाव मा’नसिक रुपमा मात्रै होइन शारी’रिक रुपमा पनि देखापर्छ । यसको अत्या’धिक सेव’नले महिलालाई च’रमोत्कर्षमा पुग्न गा’ह्रो हुने गर्दछ। त्यसैगरी, महिलाहरुको अत्या’थिक र’क्सी से’वनले उनीहरुको उत्ते’जनामा कमि आउने गर्दछ।
३. पुरुषहरु जस्तै, रक्सी’ले महिलाहरुलाई पनि सोच्न र राम्रोसँग बुझ्ने क्षमतामा अ’सर पुयाउदछ। अत्यधिक र’क्सीको कारण महिलाहरुपनि यौ’न जो’खिमता निम्तिन सक्छ जसमा यौ’नरोग संक्र’मण पनि हुने, त्यस्तै उनीहरु अनियन्त्रित ग’र्भावस्थाको जोखि’ममा समेत पर्ने सक्छन् ।
सामान्यरुपमा आपस कुराकानी र आक्कलझुक्कल ब’हस हुने गरेको छ । यसबारे खुलेर तथा खुला रुपमा ब’हस नहुँदा मानिसको शारीरिक तथा मा’नसिक स्वास्थ्य सुधारमा टेवा पुग्न सकेको छैन । माद’क प’दार्थ से’वनले कालान्तरमा महिला र पुरुष दुवैको यौ’न जीवनमा न’कारात्मक असर पुर्याउने गर्दछ। जसको बारेमा पुरा जानकारी हामीले माथी दिईसकेका छौ।
प्रकाशित मिति २० चैत्र २०७६, बिहीबार १३:३२